Hypertonia: waa maxay, noocyada, sifooyinka iyo daaweynta | Ragga Stylish
Hypertonia: waa maxay, noocyada iyo astaamaha
Erey si ballaadhan loo adeegsado si loo qeexo isbeddellada ku yimaadda murqaha muruqyada oo isu muujiya koror ku jira ama xakameyn la'aanta neerfaha ayaa lagu yaqaan magaca hypertonia. Hypertonia waxaa si ballaaran loogu barto adduunka jimicsiga jirka waxayna saameyn kartaa qeyb weyn oo ka mid ah dadweynaha.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku dhowaanshaha, astaamahiisa iyo sida ay u saameyn ku yeelan karto jirka.
1 Waa maxay hypertonia
2 Sida loo qiimeeyo
3 Sababaha keena hypertonia
4 Hypertonia iyo hypotonia
5 Spasticity, dystonia, iyo qallafsanaan
Waa maxay hypertonia
Hypertonia waa erey loo isticmaalo in lagu qeexo isbeddelada ku dhaca muruqyada muruqyada, taas oo muujinaysa murqaha oo kordhay iyo xakameyn la'aanta dareemayaasha dareemayaasha ee ku yaal aagagga habka dhexe ee neerfaha.
Murqaha muruqyada waxaa lagu qeexaa sida caabbinta uu muruqu soo bandhigo markii si dhaqso ah loo abaabulo, taas oo ah, waa farsamaynta jir ahaaneed ee jirku u soo saaro caqabadaha muruqyada markii la beddelo. Waxaa ka mid ah hypertonia, hypotonia, dystonia iyo qallafsanaan.
Hypertonia waa isbeddel ku lug leh xiisad sii kordheysa marka muruqyada ay si dhaqso ah u socdaan. Intaas waxaa sii dheer, bukaanku waxay ku koobi karaan naftooda inay sameeyaan foosha muruqyada firfircoon iyo kala-goysyada xubnahooda si xakameysan oo isku dubaridan. Tani waa sababta xanuunka, cilladaha, iyo kaqeybgalka xadidan.
Laakiin waxay kuxirantahay nooca, waxay sidoo kale soo bandhigi doontaa astaamo kale iyo jawaabaha dhaqdhaqaaqa kala duwan. Kala-baxa ayaa keena sheyga adag ee cilladda de sharciyeynta ficil-celinta myotoniga iyo ku guuldareysiga ka-hortagga labada dhinac.
Sida loo qiimeeyo
Guud ahaan, si loo qiimeeyo muruqyada muruqyada, bukaanku waa in marka hore la dhigaa meesha ugu habboon si loo tijaabiyo muruqa (suuxdinta ama u nugul), ka dib cabbirka ayaa la sameeyaa.
Aan aragno maxay yihiin tilmaamaha gaarka ah ee lagu qiimeeyo midka ay dhigayaan:
Baaxadda: Waa in la abaabulaa oo si cadaalad ah u siman waana inaad jawaab ka sugtaa calaamada mandiilka. Caadi ahaan calaamadahan waxaa badanaa lagu muujiyaa kala go 'dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa oo markaa yaraada.
Adkeyn: Waxay u dhaqaaqi doontaa si isku mid ah iyo xawaare yar. Si ka duwan spasticity, waxay sida caadiga ah ka jawaabtaa kala go 'kala duwan ilaa dhaqdhaqaaqu dhammaado.
Sababaha keena hypertonia
Labada nooc ee cudurada waxaa sababa dhaawac soo gaara habdhiska neerfaha ee bartamaha, laakiin labadaba waxaa sababa dhaawac soo gaara qaybaha kala duwan. Tusaale ahaan, dabacsanaanta waxaa lagu gartaa curyaaminta maskaxda, istaroog, iyo nabarrada kiliyaha maskaxda, halka hypertonicity-ka ay keento curyaaminta supranuclear, cudurka Parkinson, xumaanshaha qanjirka 'ganglia', iyo dhaawacyada maskaxda ku dhaca.
Dhiig karka wuxuu ku dhacaa carruurta, dhallaanka, iyo dadka waaweyn, marka daaweyntu waxay gaari doontaa yoolal kala duwan. Muruqyada oo kordhay waxaa sababa dhaawacyo iyo cuduro saameeya habsami u socodka duubista iyo isbeddelada fidinta, iyo habka ay tahay in muruqyada ay u go'aamiyaan goorta ay qandaraaska la galayaan koox muruqyo ah isla markaana ka hortagayaan fulintooda.
Sidaa darteed, cilladaha ku jira xarunta sare (maskaxda, kiliyaha, mootooyinka neerfaha, cerebellum), astaamaha loo dirayo muruqyada lama dhaqaajin doono jir ahaan, waxay ku jawaabi doonaan dhaqdhaqaaq xadidan.
In kasta oo hyperosmolarity-ka uu ku dhaco da 'kasta, muhiimadda ay leedahay ogaanshaha cudurka ayaa si gaar ah muhiim ugu ah carruurta. Xilliga uurka, ilmuhu wuxuu kusii jiraa booska uurjiifka muddo dheer. Tani waxay sababi kartaa muruqaaga muruq inuu noqdo hypertonic dhalmada kadib. Si kastaba ha noqotee, cudurku uma baahna inuu soo muuqdo waqti ka dib calaamadahana waa ku meel gaar. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaa faa iido leh in la booqdo dhaqtar ku xeel dheer daaweynta jirka si loo hubiyo caafimaadka cunuga Ha iloobin degdegga baaritaanka dadka waaweyn iyo daaweynta.
Hypertonia iyo hypotonia
Sidoo kale, hypertonia waxaa lagu kala saari karaa hypotonia. Hypotonia waxay ku lug leedahay hoos u dhaca muruqyada. Xiisadda muruqyada ee xad dhaafka ah waxay u horseeddaa adkaansho dhaqdhaqaaqa, halka muruqyada oo aad u hooseeya ay u horseedaan nasasho. Labaduba waxay yareyn doonaan dhaqdhaqaaqa jirka, laakiin waxaa loo isticmaali karaa in lagu xoojiyo dhaqdhaqaaqa jirka ee muruqyada si loo daweeyo hypotonia. Intaa waxaa dheer, labaduba waxay raaci karaan koorsooyin ku saabsan daawada jirka.
Hypertonia waxaa lagu daaweyn karaa daawooyin si looga hortago cudurada ay sababaan cudurada. In kasta oo haddii aan ku darno fiisiyoteriga, natiijooyinka ayaa noqon doona kuwo faa'iido badan leh. La qabsiga hirgalinta edbinta iyo anshaxyada daaweynta ayaa u oggolaanaya bukaanada inay hagaajiyaan tayada noloshooda.
Spasticity, dystonia, iyo qallafsanaan
Spasticity waa nooca ugu badan ee hypertonia ee carruurta qaba curyaanka maskaxda. Waxaa lagu gartaa xawaare, taas oo ah, xawaaraha sare ee muruqyada oo fidiya, waxaa sii weynaanaya iska caabbinta dhaqdhaqaaqa wadajirka, waxayna badanaa u muuqataa si deg deg ah xawaare xaddidan ama xawaare gaar ah. Intaa waxaa dheer, way ku kala duwanaan kartaa iyada oo ku saleysan arrimaha dibadda, sida xanuunka, feejignaanta, iwm. Baadhitaanka jirka waxaa weheliya astaamaha ku lug lahaanshaha ugu horeeya ee neerfayaasha neerfaha, sida clonus, hyperreflexia, iyo Babinski's sign.
Dystonia waa sababo kale oo keena hypertonia waxaana lagu qeexi karaa inuu yahay isbedel dhaqdhaqaaqa, taas oo foosha muruqyada oo isdaba joog ah ama isdaba-joog ah ay dhacdo, taasoo keeneysa bukaanku inuu "maroojiyo," inuu sameeyo dhaqdhaqaaqyo soo noqnoqda ama adadag, ama isbeddelo qaabka. Focal dystonia waxay saameyn ku yeelan kartaa kooxaha muruqyada ee gaarka ah qayb ka mid ah jirka, ama waxay noqon karaan kuwo guud.
Ugu dambeyntiina, adkaanta waxaa lagu qeexaa xaalad ay kala-goysyadu soo saaraan iska caabin dhaqdhaqaaqa dhaqtarka iyo xaaladaha soo socda ayaa jira:
Kuma xirna xawaaraha dhaqdhaqaaqa.
Muruqyada 'Agonist' iyo 'antagonist' ayaa isla kici kara isla markaana iska caabbinta dhaqdhaqaaqa wadajirka isla markaaba wuu kordhaa.
Xubnaha addimmadu uma jeedaan inay ku noqdaan meel cayiman ama xagal go'an.
Muruq-jabka masaafada fog ee ikhtiyaariga ah ma sababi doono dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn oo kala-goysyada adag.
Dhibaato kasta ha noqotee, waxaa si weyn loogu talinayaa in la booqdo dhakhtarka jimicsiga jirka si uu u sameeyo daaweyn ku habboon cudurada la magacaabay. Waxaa muhiim ah in si deg deg ah wax looga qabto si dhibaatadu aysan u cuslaanin khabiirka takhasuska lehna uu aad u yaraado si uu awood ugu yeesho inuu sameeyo baaritaan iyo daaweyn wanaagsan.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto hypertonia iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Hypertonia: waa maxay, noocyada iyo astaamaha